Hevitra MPANOHARIANA | Novambra 2009 |
Tolona koa ny fanaraham-baovao
2009-11-30 @ 22:44 in Ankapobeny
Voalohany, tao anatin'ny herinandro latsaka teo ho eo dia hitako nihaniadana ny halakin'ny fiseraserana amin'ny aterineto fampiasako. Moov itony fandoa sara mialoha itony no fampiasako mandra-piandry izay mety hahafa-po ahy rehefa tena miasa ny Hosina (cable na fibre optique) ka mivoatra tokoa ny tontolon'ny serasera, izany hoe sady mihamora takatry ny besinimaro ny sarany no mihahaingana ny fahazoana soratra fototra (donnée). Mazava loatra fa vokajiko tsara sy raisiko naoty avokoa ny fandaniana ataoko hamantarako ny fotoana hampidirana fahana vaovao indray. Tsikaritra tsara noho izany, fa raha nahafapo ahy, izany hoe nahafahako nanangona fotsiny ny vaovao avy amin'ny vohikalam-baovao malagasy sy bolongana mpivoy hevitra mifandraika amin'ny zavamisy eto Madagasikara ny folo minitra teo alohaloha teo dia tsy ahavitako ny toy izany intsony amin'izao fotoana izao fa sady manafosafo ny 20 minitra no sarotra vao miseho endrika ny ankamaroan'ny vohikalam-baovao mety ho tsy ampiantranoan'ny server eto Madagasikara (sady amin'ny moov koa angaha).
Tsikaritro manokana fa miandry amina minitra avokoa vao miseho tsara ny vohikala mpanome vaovao malagasy iray. Misy aza any amin'ny fito minitra any vao tafavoaka ny takelaka fidirana iray. Ny tena tratran'ireo toe-javatra ireo dia ireo atao hoe manana fahaleovan-tenany ihany amin'ny famoaham-baovao satria tsy mandoka loatra ny eo amin'ny fitondrana izy ireo. Fa ny miavaka indrindra amin'ireo rehetra ireo dia ny vohikala iray niorina am-bolana izao mpanohana ny FAT (Actumada) fa toa tsy manisa segondra aza dia tafasokatra avy hatrany. Ny tahaka ny an'io farany io angamba no fisokatry ny takelaka any amin'ny tany mandroso any, hoy ny eritreritro. Fahoriana tanteraka kosa izany hijery ny vaovaon'ireo vohikalan'ny gazety iraisam-pirenena (tandrefana) miresaka Madagasikara fa ampolony minitra no isaina vao tafasokatra azo vakiana ny soratra fa ahato kosa (stopper) izy tsy hamoaka sary sy dokambarotra fa manjary sintoniny hatrany ny fakana soratra fototra (donnée). Ilay soratra fototra moa dia araka izay fahazoako azy no lazaiko ka ahitsio aho raha misy tsy mety ny filazako azy.
Manangona vaovao fotsiny no lazaiko eto satria mpanara-baovao ny tena no ilaiko ihany koa izany horaiketina tantara amin'ny fotoany dia efa manahirana aoka izany ny mahazo azy eto Madagasikara. Tsy misy fanakanana na sivana mivantana izany fa dia lasa mandany vola kokoa aho rehefa ela kokoa ny fotoana iseraserako. Na izany aza dia manahirana ihany ny ataon'ny Mpanome Tolotra Iseraserana (fr: FAI) manao izay tiany atao amin'ny fitadiavam-bola ranofotsiny fa toa tsy miraharaha loatra ireo mpampiasa aterineto efa zatra. Ny dokambarotra fotsiny no atao mipoapoaka fa ny fikarakarana ny mpampiasa ny tolotra tsy raharahiana akory. Angamba mila fikambanana mpiaro ny zon'ny mpampiasa aterineto, hiteny ny ataon'ireto orinasa Mpanome Tolotra Iseraserana ireto fa ry zareo indray no manelingelina ny zo hahalala vaovao.
Olana iray ahy manokana aloha, tsy fantatro manko na izaho irery no tratran'ity olana ity na ahoana fa mba manontany ny hevitr'ireo mpampiasa moov mandoa sara mialoha aho, fa misy tahirin-kevitra iray mba tiako alaina izay ao amin'ny lahatsoratr'i Achille 52 ao momba ny bolabola (bois de rose) fa tsy mety mahazo azy io mihitsy aho. Raha eo ho eo amin'ny 4.7 MB eo no lazaina fa vesatr'ilay tahirin-kevitra tiako sintonina dia eo amin'ny 1.2MB eo foana dia votsotra ny fitrohana ilay tahirin-kevitra, noho izay dia tsy mahasokatra ilay tahirin-kevitra mihitsy aho. Averiko indray fa mety ho olana ahy manokana ity noraisiko ohatra ity, nefa dia te-hanontany indrindra ny hevitry ny hafa mipetraka eto Madagasikara mampiasa Moov aho.
Mbola vao maka vaovao fotsiny no ambarako aminareo fa ny manome vaovao, indrindra fa ny mamoaka sary ihany koa dia mbola tantara hafa mihitsy. Tsy fantatro aloha ny any an-kafa any, fa tamin'ny mbola azoazo aza ny fiseraserana no namoahako ireny sariitatra maromaro ireny fa lazaiko anareo fa maherin'ny atsasakadiny (mba tsy ilazako hoe adiny iray latsaka fahefany) no namoaka azy ireny fotsiny. Izany matetika no mahatonga ny tena ho kamo hamoaka sary na dia mba mety hisy ihany aza ny azo avoaka. Dia hevero amin'izany ry mpamaky hajaina ny tolona ataonay te-hahalala vaovao sy te-hampahalala vaovao ihany koa. Saingy noho ny fitiavana manko no anaovana izany, avoaka ny marina sy ny zavamisy fa avoaka ihany koa ny hevitra.
Sao mba fitahiana ilay fikatsoana?
Aza mora tezitra fa saino tsara ny zavatra soratako aloha. Mety ho gaga ny maro nefa izay mihitsy no sainiko. Tsy mety mifanaraka mihitsy ny efa-tonta amin'ny fandrafetana ny governemanta sy ny andrim-panjakana hafa. Lasa indray ny saiko manao hoe sao dia izay aloha no mety sy tsara amin'izao fotoana izao? Misy manko ny mifikitra hitantana ny zava-drehetra saingy tsy mety tontosa na tsy mety eken'ny hafa hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany. Dia velom-panantenana ny tena fa tsy very toky. Nahoana tokoa moa no terena hiasa ny mpankahala sy ny ankahalaina, ny nandroba sy ny voaroba, ny mpanangana sy ny mpandrava? Fa eto ihany koa no mifampitady ny hery sy ny diplaomasia.
Amin'izao fotoana izao dia tadiavina mafy ny hitantanan'ny sasany samirery ny firenena ary tsy tapaka ihany koa ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa kadradradradraina mafy ho toy ny loza mihantona ho an'ny Malagasy izany fahatapahan'ny fanampiana sy ny tetibola iarahamiasa izany. Ataoko fa raha nahavita tena samirery ny tao amin'ny FAT tokony tsy nifampiraharaha tamin'ny ankolafy hafa na oviana na oviana. Toa izay no tiany aseho amin'izao fotoana izao nefa voatery nifanaraka tamin'ny hafa ihany tany Addis Abeba sy Maputo. Mbola manahy zavatra hafa mihitsy aho eto. Ny fanahiana mazava ho azy tsy voatery ho marina saingy tamin'ity taona ity moa dia zavatra nihoampampana noho ny fanahiana hatrany no nitranga, ka dia matahotra aho.
Manahy aho fa iniana atao ny mampitarazoka ny zavatra rehetra, indrindra fa ireny misy fiaraha-miasa fitrosana ireny, hanehoana fa tsy maintsy hikoropaka ihany ny firenena lehibe mihevitra ho mitana ny ankamaroan'ny vola tadiavina. Mifanenjana amin'ny Amerikana sy ny vondrona Eoropeana araka ny fanahiako ny fitondrana FAT amin'izao fotoana izao ka izay iray milefitra eto. Raha milefitra ny firenena voalazako ireo dia hibata fandresena lehibe ry zareo. Fa raha tsy mety milefitra kosa ny Amerikana sy ny Eoropeana, ka tapaka tarangana ny fanampiana, dia azony atao tsara amin'izay ny miala... nefa misy tetika goavana hatrany ao ambadik'izany. Miala izy tsy noho ny fitakian'ny olona fa miala izy rehefa potika tanteraka ny toe-karena ary maizina tanteraka ny ho avy, ka izay misolo azy io no tena iangonan'ny rihitra rehetra, izany hoe mizaka ny tsy fisiana rehetra... dia afaka hitabataba ihany koa ry zareo fa tsy mahavita na inona na inona ihany koa izay nihevi-tena hisolo azy ary mbola mieritreritra ny hibata fandresena ihany koa izy ao anatin'izany. Eo ihany koa anefa ny fiheverany fa eo ampelatanany ny hery ka tsy hisy ho afa-manao na inona na inona eo raha mbola izy koa no mitondra, no tsy hisy hafa afa-mitoondra ankoatrany eo.
Fehiny: aza heverina ho fahadalana mihitsy izay ataon'Ilaikely izao (tsy hanonona ny anarany manontolo mihitsy aho tsy hahabe fanononana ny anarany amin'ny aterineto) fa hevero fa misy fanomezatoky azony na paika henjana tsy noeritreretintsika noho ny fitabatabana mialoha ataontsika hatrany fa fahadalana sy hakelezan-doha na fifikirana amin'ny seza fotsiny no ataony amin'izao fotoana izao. Izany hoe eo hatrany ihany fomba fiteny an'ny mpanjanatany hoe "Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire" fa io hatrany no efa nahavoa hatramin'izay. Na iza na iza tsy mahafantatra marina izay tena ketrehiny amin'ny farany na tanjony farany ankoatra ny tenany fa raha fantatsika izany tokony ho hay ny mamaha ny olana. Matoa kosa toa tsy mety taitra amin'ny zavamisy izy amin'izao fotoana izao dia mbola hitany fa tsy fantatsika ny tena tiany ahatongavana. Mety ho fotoana fotsiny, na ora na andro no andrasany ka tsy tokony hampitoetoetra antsika foana. Mba hitanareo mikaro-bahaolana ve izy? Efa nanome sosokevitra hanohizana ny asan'ny minisitra voatendry teo aloha anie izy e! Koa samia mandinika tsara sao mbola diso paika hatrany isika amin'izao fotoana izao.
jentilisa, 01 desambra 2009, amin'ny 00:47
Ompa sa faminaniana ilay hoe Fozaorana?
2009-11-26 @ 23:16 in Politika
Tena mandeha ihany ny fotoana. Raha namadibadika ny tahiry aho dia toy ny efa an-taonany maro sahady no nampalaza izany biby foza orana izany. Hay moa ka vao tamin'ny taona 2008 iny no nampirongatra azy io! Izaho anefa nieritreritra iny tantara iny ho tantara efa ela dia ela. Tsy mba tahaka ny fahatsapako ny firimorimon'ny fotoana ka gaga ihany rehefa mieritreritra fa ankatoky ny faran'ny volana novambra 2009 sahady isika. Volana febroary 2008 no tena nampalaza ilay biby fozaorana teto Antananarivo, efa lasa hafa ny dikany amin'izao fotoana izao ary lasa miendrika ompa aza matetika. Henika azy i Betsimitatatra, potehiny tanteraka ny sisindrano, nolavahiny ny tany ka mety ho goana tsotra izao no itsahinao raha tsy mitandrina ianao. Dia namidy nanerana ny tsena ireo biby maramara, ary nananika hatramin'ny amin'ny trano fisakafoanana maro aza. Nanambara anefa ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany fa hofongorina tanteraka ity karazam-biby mpanimba voly sy mpihinanan zanatrondro ity. Ankehitriny, iza no mbola mieritreritra na mahatsikaritra ihany ny fisian'izany biby fozaorana izany? Efa nihena dia nihena angamba ny isany na irariana ho lany taranaka tanteraka na dia mbola tsy nandrenesako tamin'ny fomba ofisialy aza ny hoe fongana tanteraka ilay biby mandeha mihemotra (biby mi-tourne hoy ny fiteny andavanandro manafangaro ny teny malagasy amin'ny tenin'ny mpanjanatany taloha).
Dia nitodika tamin'ny tantaram-pirenena indray ny eritreritra. Herintaona latsaka taorian'ny nampirongatra ny biby fozaorana no nidina an-dalambe ny maro an'isa tamin'ny tanora teto Antananarivo. Nanana ny lazany ny faramparan'ny vola janoary sy iny volana febroary 2009 manontolo iny. Vokany, rava tanteraka ny seha-piharian'ny filoham-pirenena teo aloha, ary misimisy ihany koa no rava fihariana, potika fihariana, may ny tranom-panjakana ary niongana tamin'ny toerany hatramin'ny filoha Ravalomanana. Nanomboka tapaky ny volana martsa teo, tsy ara-dalàna intsony ny governemanta mijoro ary mbola tsy voatsangana hatramin'izao. Nirangorango ireo lazaina fa mpitondra, tsaroanareo ve ny ady ambava teo amin'ny Minisitry ny Toe-karena sy ny PDS Fianarantsoa rehefa ho lany ny vary nangalarina tao amin'ny seranan-tsambon'i Toamasina? Toa fanapotehina ihany no tena hay sanatria, ahatsiarovana ny fikikisan'ny fozaorana ny sisandrano na ny lalandrano falehan'ny olona etsy Betsimitatatra.
Fa hatramin'izao hafa dia hafa ny fomba fisainan'ny mpitondra izay nanonganm-panjakana. Rehefa migafy araka izay tratra ny heverina ho governemanta iraisana izy dia milaza avy eo fa tokony ho izay efa misy ihany no aleo manohy ny asa. Dia nobaikoana ny mpiasam-panjakana hitokona amin'ny fanohanana ny filoha sy hitazona ny minisitra izay notendreny teo aloha ihany. Dia nohetsehina indray ny miaramila hiditra an-tsehatra amin'ny fitenenana hanomezana vahana an'ilaikely. Izaho kosa rehefa nahita fa matoa nampitenenina hatramin'ny miaramila dia efa io no bala farany hanerena ny hafa hanaiky ny fitondrany tsy ifampizarany amin'ny hafa. Dia notairina amin'izay ny filankevitry ny Minisitra tsy nisy fakan-kevitra tamin'ny filoha mpiara-mitantana sy ny Praiminisitra. Efa fantatra izao fa tsy manara-dalàna fa mbola atao ihany. Manana tetika ambadika tsinona. Tsy raharahiana ny fiaraha-miasa amin'i Etazonia sy ny hafa na dia hamotehina asan'olona aza izany fa aleo miankin-doha tanteraka amin'i La Frantsa ny Malagasy. Rehefa ny toe-karena no potika nefa eo ampelatanany ny akora fototry ny harena... ho inona intsony moa ianao?
Fa izaho kosa toy ny te-hampitaha ny taona 2008 amin'ny taona 2009 ka mitodika amin'ny taona 2010 sahady na dia tsy mbola tafatsangana aza ny governemanta. Biby nirongatra tamin'ny febroary 2008 indrindra indrindra, toa tsy fantatra intsony ny fisiany fa efa toy ny tantara taloha elabe rehefa tonga ny volana novambra 2009. Koa raha hetsika nirongatra dia nirongatra tamin'ny febroary 2009 ka nahazo fitondrana tamin'ny marsa 2009... enga anie ho tsy fantatra intsony ny fisiany fa efa toy ny tantara taloha elabe rehefa tonga ny volana novambra 2010. Nofy ve sa revin-gadra? Izaho aloha, na tsy misy aza ny baiko dia miezaka ny manongotra ny herin'ny fandravana sy ny fandrobana araka izay vitako fa mety ho tanteraka ihany izany raha maro no manao toa ahy. Fa oviana moa ilay fifidianana? Fa mbola hisy ve izany fifidianana izany? sao dia ny ampolo taonany no isaina? Izaho kosa manankina ny zavatra rehetra amin'ilay Tsitoha fa heveriko fa lesona ho an'ny rehetra, indrindra ho an'izay nitady ny sitrany ahay izao toe-java-misy ankehitriny izao.
Jentilisa 27 novambra 2009 amin'ny 01:21
Fa inona no ao ambadiky ny fanambarana miaramila?
2009-11-25 @ 21:56 in Ankapobeny
Tsorina aloha fa nantenain-kanirina ny tafika vao nampivandravandra. Eo am-piketrehana ny hanoratana atao hitam-bahoaka ny hafatro na fiangaviako amin'ny tafika aho no nitsahatra indray rehefa nahita tamin'ny gazety fa nisy fivoriana miafina nataon'ny manam-pahefana ambony ao amin'ny miaramila. Mahafantatra tsara aho fa ry zareo no tena manam-pahefana eto amin'ity tanàna ity fa tsy izay milaza ho mpitondra amin'izao fotoana izao. Nihevitra ihany aho fa manana fieritreretana afaka ny mamakafaka ny zavamisy amin'izao fotoana izao ireo ao amin'ny tafika ireo. Nihevitra aho fa tsapan'izy ireo ny fitarazohan'ny raharaha ka mba handray ny andraikiny amin'ny famahana araka izay haingana izao fiziriziriana misy izao. Nitsimbadika tanteraka anefa ny raharaha rehefa nanao ny fanambarany ny Lehiben'ny Etamazaoron'ny Tafika Malagasy ny alarobia 25 novambra 2009. Nanipy ny baolina tamin'ny mpiandraikitra ny fitandroana ny fiambenana ao amin'ny prezidansa sy ny primatiora ry zareo, izany hoe amin'ny Lt-Kln isany Lylison René de Roland sy Charles [Martel?] Randrianasoavina no nanankinana manontolo ny fanendrena izay ho mpiambina avy ao amin'ny tafika ny olom-panjakana Malagasy.
Misy hafetsena lalina dia lalina hanomezana vahana manokana an'i Andry ao anatin'izany rehetra izany, satria manahy ny mpiambina nalaina hiambina nefa tsy nahazo alalana avy amin'ireo olona efa nanana ny lazany tamin'ity taona 2009 ity fandrao voaroaka amin'ny asany ka ny hany fahendrena dia ny mody any an-toby miaraka amin'ny fitaovany. Manana ny fomba fijeriny ny miaramila fa dia mahavariana loatra raha karazandrazan'ny manampy olana hafa indray no ataon-dry zareo fa tsy mitady vahaolana hampanekena ny rehetra tamin'izay tapaka teo amin'ny mpanao politika nifandamina hiara-mitantana ity tetezamita ity. Mety ho eo ny fanahiana fandrao ho tonga amin'ny tena ihany ny sazy noho ny fanonagam-panjakana izay natao, sady ny hita tamin'ny sary rahateo dia tena ireo nandray anajara mivantana sy lohalaharana tamin'ny fanonganam-panjakana mihitsy no tazamaso nanao ny fanambarana. Efa nanao ny safidiny aloha izany ry zalahy ireto nametraka ny "fanendrena" hiambina ny olom-panjakana amin'ny "mazandoha" amin'ny tafika. Rariny tokoa raha tokana hatrany ny fibaikoana ao amin'ny tafika nefa ny fijeriko azy dia diso lalana tanteraka ry zalahy. Nanampy tosika tamin'ny fiziriziriana sy ny tsy fatahorana handrava ny asan'olona an'hetsiny miankina amin'ny AGOA izay Amerikana mba handraana tanteraka ny toe-karena malagasy hiankin-doha tanteraka amin'i La Frantsa, indrisy...!
Satria efa ny hany mahazo manao fanambarana amin'ny alalan'ny tafika malagasy no nanambara fa i Andry no filoha faratampon'ny tafika sy namindra ny fanendrena izay hiambina ny olona ao amin'ny andrim-panjakana rehetra amin'i Charles sy Lylison dia enga anie tsy hisy fanambarana hafa hivoaka tampoka avy amin'ny olona mety ho afaka manao ny fanambarany ihany koa sady manana ny fahefana hanao izany. Enga anie izany hampiravona ny olana rehetra misy amin'izao fotoana izao fa raha tsy izany kosa no hitranga dia tokony hizaka ny vokatr'ireny fanambarana nataony ireny ny tafika malagasy. Koa dia samia mizaka avokoa fa izahay efa am-bolana no mahatanty ny zavamisy ankehitriny matoa mahasahy milaza ny hevitray hatrany ary tsy menatra amin'izany sy amin'ny tantara, ary enga anie ho tsara kokoa noho ny taloha ny fankalazana ny krismasy sy ny taombaovao amin'ity taona ity. Farany: mahay mihitsy ny mpanao tetipanorona amin-dry zalahy ireo matoa nahatafita hafatra nialoha ny hisiana fanambarana fampitandremana ireo mpitantana ny ankolafy mifampiziriziry. Fa izahay kosa mbola mino ilay tarigetra manao hoe :"Ny hery tsy mahaleo ny fanahy!"
jentilisa, 26 novambra 2009 amin'ny 00:02
Tandindonin'ny ady an-trano?
2009-11-24 @ 11:36 in Ankapobeny
Marihina dieny mialoha fa raha miresaka ady an-trano aho eto dia tsy maniry ny hisian'izany mihitsy eto Madagasikara. Mitaratra kosa ny zavamisy eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao (izay firenena nisy fanonganam-panjakana) aho ka manahy dia manahy ny hisian'ny ady an-trano ambolen'ireo mahazo tombotsoa amin'izany.
Nampisaina lalina ahy hitodika tsara tany amin'ny 26 janoary 2009 (andron'ny fandrobana) indray ny toe-draharahan'i Ejipta sy Alzeria nandritra ny lalao baolina fandaka tamin'ny herinandro lasa iny. Nadikako ho amin'ny teny malagasy mihitsy moa ny lahatsoratra mitantara izay tsy ambaran'ny haino aman-jery mahazatra loatra tamin'iny raharaha tsy baolina fandaka intsony iny. Hitako tao anatin'izany fitantarana izany fa nentina manokana tamin'ny fiaramanidina maromaro ny jiolahimboto Alzeriana tsy mpijery baolina mahazatra, handrava tsena, hampihorohoro ny tanàna, hamono izay Ejipsiana hitany fa tombony ho azy ireo fotsiny ny manatrika ilay lalao izay nandresen-dry zareo ihany koa. Mariho tsara ilay hoe fiaramanidina an'ny miaramila no nitatitra ireo jiolahimboto ireo. Manahy aza aho fa miaramila ihany ireo nampihorohoro ireo matoa miaramila Sodaney 15000 aza tsy nahafehy an-dry zareo. Moa tsy azo sainina ho nisy tahaka izany koa ve teto Madagasikara tamin'ireny 26 sy 27 janoary 2009 ireny? Hita any amin'ny gazety (Taratra sy Tia Tanindrazana) indray fa mbola mitaky ny valin-kasasarany ny "miaramila amperinasa teo aloha" na "rezervista tanora" nametraka ny tetezamita amin'ny toerany. Nojereko tsara indray mandeha fa nisy kamiao tsy an'ny miaramila (noho ny lokony fotsy ary heveriko ho nitondra ireo fitaovam-piseraserana azo nentina tao) nivoaka ny RNM sy ny TVM tamin'iny andron'ny 26 janoary iny rehefa nanomboka may ireo tranom-panjakana roa ireo.
Manaraka izany, efa hitahitantsika eny ihany koa ny adin'ny "mpanjaka" eo amin'ny samy Antakarana amin'izao fotoana izao. Navoakan'ny gazety iray indray koa fa bokon'hozatra maro dia maro no notaterina tamin'ny kamiao ka nanafika ny zomba sy ireo tao anatiny. Ny olana amin'ity raharaha iray ity dia noho ny fomba fanomanana ny tsanga-tsaigny nokasain'ny iray hotontosaina amin'ity herinandro ity fa izay mahatsangana ny saina amin'ny fomba rehetra manko no hekena ho mpanjaka. Efa tsy dia nahazatra loatra angamba ilay fifanafihana nisy noho ny marimaritra iraisana nahazatra ny mpiray foko nefa toa ao anatin'ny "fanao" ilay hoe amin'ny fomba rehetra. Karazana kilalao ratsy ihany izy ity ary ny tena manahirana dia ny nitsabahan'ny fitondrana foibe tamin'ity raharaha iray ity. Mety ho resaka politika no antony ambadik'ity raharaha ity nefa mety hisy ihany koa ny lafiny vola mety mandehandeha ao anatiny (fampanofana tany sy ny tombontsoa mifandraika amin'izany). Mariho tsara indray fa mbola tafiditra mpikarama an'ady ihany koa ity raharaha iray ity.
Mampanahy ihany ny ataon'ny mpitia baolina lavalava sasantsasany satria tsy mahazaka resy mihitsy ry zareo hany ka manapaka hatrany ny fizotry ny lalao. Soa aloha fa tsy tonga hatrany amin'ny gidragidra tambambe tamin'ity indray mitoraka ity. Ny manahirana aminy dia ny lonilony ao amin'izy ireo rehefa resy ka mora entim-po. Mora tarihina amin-javatra tsy azo visavisaina manko ny olona tahaka ireny, nefa ny tena tsy mifanalavitra amin'izy ireo ihany koa ka sao mipitika aty aminay ary ny rà hoy ny fomba fitenenana izay. Fa enga anie ny hamisavisana ny ratsy no hihavian'ny soa. Ny tena mahakamo manko dia enjehina am-pitenenana hatrany aloha ny mpanohana ny ankolafy ho sakana hatrany amin'ny fampandehanan-draharaha misy amin'izao fotoana izao. Ilay resaka manko tsy ilay olona mpitarika intsony no enjehin'izy ireo na haratsian'izy ireo sy melohin'izy ireo fa ireo mpanaraka ihany koa. Eto aho no miteny fa tsy mitondra mankaiza mihitsy ny fifandrahonana ambava mety hitondra mankamin'ny fifamonoana eo amin'ny samy mpanaraka ny andaniny syny ankilany satria tsy mipaka velively any amin'izay naniraka ny faharatram-po mety ho teraka avy amin'izany.
Mivadika indray ny resaka eto, manahirana ahy ny mbola andrenesana ireo minisitra teo aloha, miresaka ny amin'ny asany izay efa tokonyho fampandehanan-draharaha tsotra sisa. Ny tena tsy ankasitrahako dia ny mbola hakan'ny mpanao gazety resaka amin'ny maha-minisitra azy ireny hatrany. Karazany fanakorontanan-draharaha sy fampisavorovoroana ny fiaraha-monina amiko ny fanaon'ny mpanao gazety manontany azy ireo amin'ny mahaminisitra azy ireo izay. Maninona moa raha mampitandrina ny manao gazety rehetra hoe ireo izay mitonona ho minisitra rehetra dia efa tsy tokony ho minisitra intsony ary tsy mba manaja tena manao taratasy fialana na filazana ampahibemaso fa fampandehanan- draharaha sisa no atao mandra-piavin'ny tokony ho governemanta iraisana. Karazana etika no apetraka amin'ny mpanao gazety tsy hanontany ireo olona ireo amin'ny maha-minisitra azy intsony. Heverina ho fanakorontanam-bahoaka ny mbola finiavana manontany azy ireo amin'ny raharaham-panjakana izay tsy tokony hanaovan'izy ireo filankevitra na fanapahan-kevitra ao anatin'ny minisitera intsony.
jentilisa, 24 novambra 2009 amin'ny 13:45
Ny miaramila mahatsapa adidy sy ireo ve no mandrafitra ny governemanta?
2009-11-20 @ 22:40 in Politika
Mitaintaina avokoa ny mpanara-baovao politika miandry ny fivoahan'ny mpikambana ao amin'ny governemanta iraisan'ny rehetra. Samy nanana ny paikany ny tsirairay tamin'ny fandrombahana ny toerana tsirairay. Nisy toerana nahitako ny lisitra manko ary rehefa notopazako maso dia tsy kisangisangy ilay izy fa azo heverina tsara (na sanatria mety ho tsy marina aza!). Somary nahavariana ihany ny filazana mialoha nataon'ny ankolafy sasany fa tsy azo soloina intsony ny minisitry ny fampianarana ohatra satria tsy mety ny manolo minisitra antenantenam-pianarana izany. Fantatra ihany fa tao anatina taom-pianarana no nanaovany izay tiany natao teto amin'ny firenena. Misy tetika ambadika tao anatin'io fifikirana minisitera tsy fiandrianam- pirenena io. Heveriko avy hatrany fa tiana ampiasaina ny mpiasam-panjakana ao amin'ny fampianarana hanao fampielezan-kevitra sy hitatitra haingana ny voka-pifidianana ka avy amin'izay no mety hanamboamboarana ny voka-pifidianana. ny minisiteran'ny fampianarana tsinona no maro mpiasam-panjakana (mpiasam-bahoaka) indrindra sy mieli-patrana mahazo hatramin'ny fokontany rehetra manerana an'i Madagasikara.
Izay no nanoratako tao amin'ny famahanam-bolongana fohy (twitter user jentilisa) ny tsy tokony ampiarahana velively ho ana ankolafy tokana ireo minisitera roa samihafa ireo dia ny fampianarana sy ny atitany. Ao amin'ilay tombatombana moa dia tsy tafaraka aloha ilay izy. Ny tena marina no tsy fantatra na hanao ahoana na hanao ahoana. Ny minisiteran'ny fahasalamana kosa indray dia mbola an'ny ankolafy hafa tsy iretsy ankolafy manana ireo minisitera roa tian-kotondroina etsy ambony. Azo heverina ho mahenika ihany koa an'i Madagasikara iray manontolo io minisitera iray io, na dia ekena tokoa aza fa tsy tonga hatrany amin'ny fokotany rehetra. Azo lazaina fa samy manana hafetsena mihitsy ireo ankolafy tsirairay na izaho no lasa lavitra loatra ny fisainako amin'ny hoe fanomanana fifidianana ho hatao mandritra ny tetezamita ka ireo fitsinjarana minisitera ireo no natao dia mba hanomanan'ny ankolafy indrindra indrindra izany fifidianana izany na dia eo aza ny andraikitra sahaniny ho an'ny vahoaka. Efa nisy ihany moa ny fetsifetsy nanao filazana tamin'ny mpiasam-panjakana rehetra any amin'ny sampan- draharaham- panjakana any fa ny filohan'ny tetezamita irery ihany na ny fiadidian'ny tetezamite irery ihany no tokony hotoaviny sy handraisany baiko. Atsahatra eo aloha ny amin'iny satria atao hoe tombana ihany no misy hatreto fa omena anao etsy ambany ihany izany lisitra hitako izany.
Fa ahoana ny resaka miaramila?
Toe-draharaha nanamarika ity herinandro ity ny fanambarana samihafa nataona manamboninahitra miaramila vitsivitsy. Nisy ireo manamboninahitra no mitady hanindry fa misy ny manana zo tsy azo ifampizarazaran'ny filoham-pirenena. Mba nijery rakibolana teny vahiny (na dia teny ofisialy aza) ihany ny tena ka nahita fa toy ny hoe tombontsoa manokan'ny Mpanjaka (nahavariana ahy io teny io fa naninona no tsy ny filoha no noraisiny?) io resaka zo tsy azo ifampizarana amin'ny hafa io. Soa ihany fa nisy ny manamboinahitra hafa avy hatrany dia nahasahy nijoro nilaza fa tsy voatery araka izay heverin'iretsy voalohany no andikana izany zo tsy azo ifampizarana izany. Ireo voalohany izay notarihan'ny Lt-Kl Charles Randrianasoavina sy Lt-Kl Lylison de Roland moa tao amin'ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra no nanao ny fanambarany. Ireo nanohitra azy dia ny Kmdà Roger Luc sy ny Kp Mbohoazy Lahinilainy izay fantatra fa avy ao amin'ny 1°RFI kosa tsy fantatro mazava ny toerana nanaovany fanambarana.
Zava-mahavariana ireo fanamabarana ireo. Iretsy voalohany mety hihevitra fa ry zareo sy ny tariny no mahery ka tsy hisy ny hahasahy hanohitra azy ireo. Karazana fanindriana ny hafa rehetra no nataony. Etsy ankilany ihany koa anefa dia mety ho hevitra farany nataon'izy ireo ny fanambarana nataony hanavotany ny olona arovany mba hanandanja kokoa eo amin'ny firenena fa tsy ho vasok'ilay hoe tsy maintsy nifampizara fahefana. Nisy tampoka ny miaramila namaly ny fanambaran'izy ireo, nahasahy naneho ny heviny, nefa tsy voatery hanambara ny heviny manohitra ireo nanao fanambarana tao amin'ny Lapam-panjakana ka hampiseho hoe mizara ny tafika. Teny tsy zakan'ny ao amin'ny miaramila rahateo izany hoe "mizara" izany. Ny roa tonta nanao fanambarana dia samy tsy naka alalana tamin'ny Lehiben'ny etamazaoron'ny tafika na ny minisitry ny Fiarovana. Raha ny tokony ho izy izany dia mendrika ny hosaziana avokoa ry zareo rehetra ireo. Efa nanambara ny Kaomandà Roger Luc fa efa naharay ny saziny saingy tsy ahoany loatra izany rehefa tsapany fa nanao ny adidiny izy ary tsy manenina tamin'izay nataony. Izaho manokana dia mendri-piderana ny nataony, na dia ny hahatonga saina ireo mpanao fanambarana tsy nahazoana alalana ihany aza no mety ho tanjony. Te-hamerina ny Tafika amin'ny sehatra tokony hisy azy izy fa tsy hitsabaka amin'izay tsy tokony ho tsabahiny. Olona firy re no mba mahasahy ny manao ny tahaka azy ireo? Mandika ny lalàna hiarovana ny rariny sady manaiky ny sazy mifandraika amin'ny fandikan-dalàna nataony. Misy manko ireo mandika lalàna nefa tsy te-hanaiky ny sazy tokony hampiharina aminy tamin'izay nataony. Endrika fanajana ny lalàna amin'ny fomba hafa.
Ireto ary ny lisitra nisy namoaka izay lazaiko hatrany fa mbola miandry fanamarinana ofisialy:
Eugène Mangalaza, Premier Ministre
Ny Hasina Andriamanjato, VPM Economie
Manandafy Rakotonirina, VPM Fonction Publique
Manoro Régis, VPM Enseignement Sup. et Recherche
José Andrianoelison, Ministre Finances et Budget
Gal Noel Rakotonandrasana, Ministre Forces Armées
Serge Zafimahova, Ministre Transports et météorologie
Henri Roger Ranaivoson, Ministre Affaires Etrangères
Josiane Robiarivony, Ministre Energie
Julien Razafimanjato, Ministre Education Nationale
Miandrisoa Marcel, Ministre Enseignement Tech. et Formation prof.
Serge Radert, Ministre Commerce
Gal Organès Rakotomihantarizaka, Ministre Sécurité intérieure
Rafatrolaza Bary, Ministre Mines et Hydrocarbures
Serge Ranaivo, Ministre Jeunesse et Loisirs
Montfort Enselme, Ministre Pêche et Ressources Halieutiques
Augustin Andriamanoro, Ministre Télécommunication, Postes et NTIC
Manantsoa Victor, Ministre Tourisme et Artisanat
Sophie Ratsiraka, Ministre Environnement et Forêt
Rolland Ravatomanga, Ministre Agriculture et élevage
Gal Claude Ravelomanana, Ministre Gendarmerie
Ramisandrazana Rakotosoa, Ministre Justice
Nirhy Lanto Andriamahazo, Ministre Eau
Guy Rivo Randrianarisoa, Ministre Travaux publics
Tabera Randriamanantsoa, Ministre Intérieur
Rapelanoro Rabenja, Ministre Santé
Azaly Ben Marofo, Ministre Sports
Nathalie Rabe, Ministre Communication
Randriamandranto Ihanta, Ministre Décentralisation
Dr Joseph, Ministre Population et Affaires Sociales
Julien Reboza, Ministre Aménagement du Territoire
Tina Rasamimanana, Ministre Industrie
José Vianey, Ministre Culture et Patrimoine
Raha raisina isaky ny ankolafy kosa dia tahaka izao:
jentilisa, Asabotsy 21 novambra 2009 amin'ny 00:45
Mianatra mijoro (Apprendre Ã s'affirmer)
Ny lalan'ny fandriampahalemana
2009-11-06 @ 23:57 in Politika
Noraiketina tamin'ny fotoana farany ihany fa dia iaraha-mitantana araka ny filaza azy tokoa ny tetezamita amin'izao fotoana izao raha ny ho fivoakan'ny tovana amin'ny fifanarahan'ny Maputo voalohany no tarafina. Rehefa nodinihina dia ny lalan'ny fandriampahalemana no noraisina, izany hoe nidifiana lavitra ny mety hisisan'ny gidragidra eto amin'ny tanàna. Raha nandre ny momba azy ity voalohany indrindra aho dia kivy tanteraka satria ny mpampita vaovaon'ny mpanohana ny mpanongam-panjakana no nihazakazaka nahavoaka voalohany ny resaka, nefa dia manana ny fomba fialzany izy... tena talentany tokoa ny nampita ny vaovao.
Nitamberina ao an-tsaina ny foto-kevitra tsy hanekena na oviana na oviana ny mpanongam-panjakana hitantana na dia ny tetezamita fotsiny ihany aza. Ny Malagasy anefa amin'ny ankapobeny dia mpijery ny zavamisy (réaliste), ary manana ilay fomba fitenenana manao hoe: "ny heloka ibabohana mody rariny, ary ny rariny itompoana mody heloka." Raha azavaina amin'ny fiteny ankehitriny izany dia manao hoe ny heloka rehefa ekenao fa nataonao tokoa ary nanenina tamin'izany ianao, dia mamindra fo aminao ny olona (olon'ny fo manko ny malagasy) ka lasa miandany aminao... miezaka ny olona ny hanampy anao hiarina amin'izay fotoana izay. Misolo vava anao amin'izay nanaovana hadisoana ihany koa ny olona mba hieritreretan'ilay nanaovana hadisoana tsara amin'ny sazy hampiharina anao.
Ny rariny, tsy tiana hozogozonina kosa na ihenjanana eo amin'ny Malagasy araka ny nolazaiko ihany, dia manjary ataon'ny olona ho helokao indray... eo ny olana, tsy nijery ny mahaolona mety diso ianao araka ny fijeriny fa manao ilay akaikin'ny fiteny hoe ny tendrom-po tsy mba namana. Mpandala ny fihavanana ny Malagasy, araka ny fiteny manao hoe aleo very tsikalakalam-bola (fahefana raha ny eto) toy izay very tsikalakalam- pihavanana (miala amin'ny ady an-trano eto), dia milefitra amin'ny sazy tokony ampiharina ka manao hoe: rano raraka tsy azo raofina iny ka ny manaraka no tsy atao intsony. Tsy dia manampahaizana loatra ny momba ny teny malagasy, itarafana ny toe-tsaina malagasy amin'ny ankapobeny, aho fa izay araka ny fahazoako azy ihany no ampitaiko etoana sady itarafana ny zavamisy ankehitriny. Fa inona ity nahazo ahy toa tahaka ireny mahay mikabary ireny?
Etsy ankilan'izay foto-kevitra iray tokony ho rariny izay, tsy fola-mandefitra fa maka toerana, ny mpanongam-panjakana no manana ny hery sy ny fitaovam-piadiana. Tsy mba tahaka ny mpanongam-panjakana hafa any amin'ny kaontinanta hafa loatra ny mpanongam-panjakana teto Madagasikara fa afaka nivezivezy tany amin'izay toerana rehetra tiany aleha. Ny hafa manko voasazy tsy mahazo mandeha any amin'ny firenena maro any avaratra indrindra indrindra. Ny teto amintsika indray efa samy tongany na Etazonia na Eoropa ka manome vahana ilay ahiahy fa ilay firenena nanjanaka ny Malagasy teo aloha ihany no mitady hangeja azy indray amin'izao fotoana izao...hiarovany ny tombotsoany fotsiny. Ny Ngeza (firenena io) anefa tsy mifampihinana loatra fa mifanaja. Koa na inona na inona mety ho hatezerana nihalohalo tao anaty tao, ny saina mandinika kosa mahatsapa fa tsy misy lalan-kafa afa-tsy izay fantatra ankehitriny amin'ny fiaraha-mitondra isian'ny filoha telo no vahaolana tsara indrindra.
Mihomehy ihany ny tena, mieritreritra ity firenena malalantsika ity, tahaka ny dia tena hafa mihitsy anie ry Rainisoazanatasy (tsaroanareo ve ny fomba fiteny tamin'ny gazety Lakroan'i Madagasikara fahiny?) mianakavy. Avy nandalovany tamin'ity taona ity izany Praiminisitra telo (na efatra), izay manjary lasa idirana ny filoha anankitelo. Nisy izany Praiminisitra Monja Roindefo izany, izay miandry ny trano ao mahazoarivo ao, nefa efa notendrena sahady izany Praiminisitra Mangalaza, nanjary nialokaloka tany Frantsa vetivety aloha, ary dia natao Praiminisitra vonjy tavan'andro Rtoa Manorohanta Cécile. Ankehitriny, tanteraka ny nofinofin'i Andry Nirina Rajoelina sy Lafrantsa antsoina hoe filohan'ny tetezamita iraisana, saingy iraisana amin'olona antsoina hoe Rakoto Fetisoa Andrianirina (Misy Nirina roa mitondra eto Madagasikara!) sy Emmanuel Rakotovahiny ilay fiantso. Tiana ankalazaina ery izany hidradradradrana fandresena angaha, nefa sonia telo no tsy maintsy andrasana amina fanapahan-kevitra somary lehibebe. Enga anie mba tsy ho mpiray tsikombakomba amin'ny ratsy izay voatendry fa hifanaramaso kosa ka tsy hisy ny hanao tandrevaka na hanao gaboraraka ny fitantanana ity firenena ity. Rediredy ihany noho izany ny ilazana ny iray ho président fa ny hafa kosa ho antsoina hoe co-président. Tsy havanana amin'ny teny frantsay ny tena, saingy ny sary ahantona eny amin'ny biraom-panjakana kosa angamba no tsy mety fa dia an'ny Président ihany e!
Faly ihany ny tena, rehefa nisaina kely, satria tsy nisy ny resy ary tsy nisy koa ny nandresy tamin'ny fifanarahana vita. Ataoko fa samy nahazo ny anjarany avy ihany ny ankolafy tsirairay. Ny olana hany sisa hitako dia ny momba ny miaramila. Misy manko ny mihevitra amin'ireo mpitondra miaramila fa ry zareo ihany no mandidy amin'izay mipetraka ho minisitra sy ho lehiben'ny etamazaoro. Anjaran'ny tsirairay ny mamakafaka sy ny mieritreritra ny tokony atao amin-dry zalahy ireo. Samy afaka ny hitabataba fa nandresy, nefa samy hahatsapa fa misy fifampiandrasana hatrany eo. Io fifanarahana io aloha no vahaolana tsara indrindra amin'izao fotoana izao fa ny ampitso no hamaritra tsara izay tena hendry sy eken'ny maro ny fihetsika nataony nandritra ny fihaonana. Ny mpino an'Andrimanitra moa dia tokony hisaotra Azy indrindra fa manomboka miaha ihany ny olana mianjady amin'i Madagasikara ary indrindra indrindra...na dia mihevi-tena ho mpitondra aza ny sasany dia misy olona roa manara-maso ny zavatra ataony nefa tsy tokony azony ataony na inona na inona. Hotohizana ny lalana!
jentilisa, Antananarivo 7 novambra 2009 amin'ny roa maraina.